NDI ANAMBARA EKWUOLA IHE EJI GBANWEE AHA ‘ABAKALIKI STREET’ N’ỌKA – hoo!haa!!
EKWEREMADỤ KAGA-ABỤKWA OSOTE ONYEISI SINETI
EJIDELA NWANYỊ TINYERE NWA AFỌ ISII N'IGBE NJUOYI
ỤWA MMEBI:OKONGWU DINARA NWA AFỌ IRI
LIVERPOOL 4-BARCELONA O:MESSI AṄACHAALA!
A GA-EBIDO IJIDE NDI NA-ERI IHE N'IRO NA RAMADAN
NDI ANAMBARA EKWUOLA IHE EJI GBANWEE AHA ‘ABAKALIKI STREET’ N’ỌKA
Onye isi oche ọchịchị ime obodo ọdịda anyanwụ Ọka nke steeti Anambara bụ Leo Nwuba, ekwuola na mkpu ndi mmadụ na-eti gbasara mgbanwe agbanwere ogbe ahụ ana-akpọbụ Abakaliki street n’Ọka adịghị ka ha si eche ya.
Nwụba sịrị na steeti Anambara adịlarị na mbụ weputa ebe ọzọ aga-akpọkwa ‘Abakaliki Street n’ime Ọka.
Nwụba sị na ebe ọhụrụ ahụ aga akpọ Abakaliki Street bụ ụzọ sitere ebe ana-akpọ Club Road, gafee ebe Queen Suites were gaba okporo ụzọ ọgba wara wara sitere Enugwu gawa Ọnicha ma kwụsị n’ebe ụlọ oriri na ọñụñụ Parktonia nke ụzọ ahụ. Ọ sịrị na-edeputara aha ogbe ọhụrụ ahụ ọfọma dika Abakaliki Street n’isi nbido na nke njedebe ya.
Ọ sị na mbughari a ebụgharịrị Abakaliki Street ebutelan ụmụ okwu dị añaa site n’ọnụ aka na-achị steeti Ebonyi bụ David Umahi. N’uche Umahi, ọ na-ahụ nke a dịka nleda anya nye steeti Ebonyi.
Okwuru na ọbụ Abakaliki bụbu is okpuru ọchịchị Ogoja mgbe ndi ọcha na-achị anyị
Mazị Nwụba gosiri ịtụ n’anya na onweghị mgbe ndi na-akagbu mgbanwe a agbanwere aha ụzọ ahụ na-ekwu ka aga-asị na enwere ebe ọzọ abakwara aha dịka Abakaliki Street n’Ọka.
Ọ gara n’ihu kwue na aha ụzọ a agbanwere ka ọ bụrụzia Club Street bụ iweputa usoro esiri seputa ụdị Ọka ga-adị n’ụdị ekwuchaa ọgwụ. Ọ sịrị na atụmatụ a ga-eme ka ihe niile dị n’ebe ha kwesịrị ịdị. O wutere Mazị Nwuba na ndi mmadụ na-ebu ihe ekwesịghị ekwesị n’uche maka mgbanwe a.
James Eze, bụ ode akwụkwọ mgbasa ozi nke aka na-achị steeti Anambara gosiputara nwute ya, na ndi mmadụ na-akọwa mbugharia abugharịrị Abakaliki Street n’ụzọ na-abụghị ya.
Ọ sịrị na onye ọchịchị bụ Willie Obianọ bụ onye ikpeazụ ga-elada mmadụ ibe ya anya ma ya fọzịkwa ụmụnne ya ndi Igbo.
Ọ sịrị na onye ọchịchị Obianọ na-agba mbọ mgbe ọbụla ime ka odoo anya ka o si chọọ ime ka obodo Ọka ọhụrụ bụrụ ịgba dị n’isi steeti.
Ọ sị na achọrọ ka ebe ahụ bụbu Abakaliki Street nakwa gburugburu ya bụrụzia ebe aga eji ime ndi mmadụ obi ụtọ mara. Eze kwuru na ogbe ahụ na-amụ anya kwa abalị na ehihie na-emekwa ka ndụ na-atọ larịị. Ọ sịrị na gọọmenti debere ọnọdụ nchekwa bụ ịgba ebe ahụ, kakwa akara eji agba n’ụzọ nke ọma bịakwa mee ka ọkụ na-enwu kwa mgbe kwa mgbe n’ebe ahụ.
Ọ sịrị na-achọburu igbanwe ụzọ ahụ bụbu Abakaliki Street ka ọbụrụ nke aga na-akpọ Willie Obianọ Avenue mana ya bụ Obianọ jụrụ kpam kpam.
Ọ sịrị na Ọbianọ chọrọ ka ihe ọbụla dị n’ebe o kwesịrị ịdị ma kwukwa na ọbụ nke a mere o ji kewapụta ebe aga eji azụm ahia mara tinyekwara ebe ndi ọzọ emere ka ha bụrụ ihe ha kwesịrị ịbụ. N’okwu ya, onweghị mgbe nleda anya mọbụ nnelị ji dị n’atụmatụ Obianọ.
O kwukwara na Obianọ ekwuelari ebum n’obi ya oji weputa ego dị nde naarị naira asaa na iri isii na ise iji nyere ndi ji ọgba tim tim ebu ndi njem aka igbanwe ọgba tim tim ha ma zụrụ nke achọrọ ka ha na-agba bụ ụmụ obere ụgbọala bọs.
Mazị Eze kwuru na ndi ana-atụ anya inwete erere a bụ ndi si na steeti ise dị na agịga ọdịda-ọwụwa anyanwu ala anyị. N’okwu ya, ndi otu ha si steeti Delta na Kwogi ga-eketekwa oke na nke a. Ọ sịrị na ụdị atụmatụ dị otu a agaghị esite n’aka onye na eletu ndi mmadụ anya.
Previous Post: ONYE ‘AMỊ’ AHAPỤLA NDI BOKO HARAM GBAA ONWE YA
Next Post: NNUKWU ỌGBA AGHARA DỊ N’ETITI EBỌNYI NA CROSS RIVER